Git Sangit News » स्वास्थ्य–टिप्स
काठमाडौँ । उमेर अनुसार पनि तपाईको उचाई आवश्यकता भन्दा कम छ वा बढेको छैन् भने चिन्ता नलिनुहोस् । आज हामी तपाईलाई उमेर अनुसार उचाई बढाउने केही उपयोगी टिप्सका बारेमा जानकारी दिदैछौँ। यी उपाय तपाईले समयमै उपयोग गर्नुभयो भने तपाईको उचाई वाश्यकता अनुसार बढ्ने गर्दछ। उचाई बढाउन केके कुरामा ध्यान दिने ? १. सन्तुलित.....
काठमाडौँ । जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनसँगै मानिसको खानपिन पनि बदलिएको छ। धेरै मसला हालेको खाना खाएर एसिडिटी हुन्छ । जसका कारण शरीर र पेट भारी हुन्छ। यस्तो स्थितिमा औषधि खाँदा पनि तपाईँलाई निको नहुन सक्छ । तर नडराउनुस्, पेटमा ग्यास जम्ने सम'स्याबाट छुटकारा पाउनका लागि यि ५ घरेलु उपाय छन् । १) अमला तपाईँलाई.....
काठमाडौँ । आजको समयमा मोटो मानिसको संख्या तेज गतिले बढिरहेको छ । धेरै मानिसहरुले शुरुवातमा मोटोपनमा खासै ध्यान दिदैंनन् । तर जब मोटोपन धेरै बढेपछि त्यसलाई घटाउन घण्टौं पसिना बगाउँछन् । मोटोपन घटाउनको लागि खानपीनमा सुधार जरुरी छ । केही प्राकृतिक चीजहरु यस्ता हुन्छन् । जसको प्रयोगले तौललाई नियन्त्रण गर्न.....
काठमाडौँ । जाडोको समय सुरु भय सङ्गै जोर्नी तथा घुँडा दुख्ने समस्या बढ्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा त घुँडा दुखाईले सामान्य हिँडडुल गर्न पनि समस्या हुन्छ । त्यसैले यस्तो पी’डाबाट मुक्ति पाउनका लागि घरेलु उपचार विधी अपनाउँदा फाइदा पुग्छ । अर्थात घरायसी विधीबाट यस्तो दुखाईलाई कम गर्न सकिन्छ । यसका लागि यी कुराहरुको.....
मौसमी परिवर्तनको कारण धेरै मानिसहरु रुघा खोकी, टन्सील, ज्वरोबाट ग्र'स्त हुने गरेका छन् । यस्तो समयमा स्वास्थ्यको ख्याल नगर्दा निकै दु:ख पाइन्छ । घाँटी खसखस हुने, नाक बन्द हुने, नाक चिलाउने, खोकी लाग्ने, रुघाबाट ग्र'स्त हुने, टाउको दुख्ने र नाक बाट पानी वा सिंगान बगिरहने लगायतका सम'स्याहरु यस्तो बेलामा देखा.....
काठमाण्डौ । आजको समयमा धेरैजसो मानिसहरु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित केहि न केहि स'मस्याहरूको सामना गरिरहेका छन् । त्यसमा कपाल झर्नु पनि अहिलेको मुख्य स'मस्याको रुपमा देखिएको छ । कपाल झर्नुको मुख्य कारण शरीरमा भिटामिन र प्रोटीनको अभाव साथै धेरै तनाव, धुम्रपान, हार्मोनल असन्तुलन, वंशाणुगत कारण आदि हुन सक्छ.....
मानिसको शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने गुर्जो नेपालका जहाँसुकै रोप्न सकिने अमूल्य जडिबुटी हो । यसले अमृत समान काम गर्दछ भनिन्छ । यसको प्रयोग गर्दा मात्रा मिलाएर खान नसक्दा शरीरलाई बेफाईदा गर्छ । कस्ता मानिसले सेवन गर्दा ध्यान दिनुपर्छ । गुर्जो सेवन गर्ने विधि यसप्रकार छन । १. ताजा गुर्जोको लहरा १०.....
काठमाडौँ । हामी धेरैलाई केराको फाइदाका बारेमा त थाहा नै होला । तर, केराको बोक्राका बारेमा भने कमैलाई मात्र थाहा हुन सक्छ। केराको बोक्रामा म्याग्नेसियम, पोटासियम र कार्बोहाइड्रेटजस्ता तत्व पाइने गरिन्छ। त्यसैले केराको बोक्राका पनि फाइदा हुने गर्दछ। आज हामी तपाईलाई केराको बोक्राका फाइदाका बारेमा जानकारी.....
दाँत केवल कुनै चिज चपाउन मात्र होईन सौन्दर्य बढाउने एक माध्यमको रुपमा पनि पर्न आउँछ । तपाईहरु मध्य कतिपयले दाँत दिनहुँ सफा गर्ने गरेको तर कहिल्यै सेतो नदेखिने या दाँत पहेंलो नै देखिने गरेको छ ? यदी छ भने यस्ता विधिहरु अपनाएर दाँतलाई सफा र सुन्दर राख्न सकिन्छ । हाम्रो गाउघर तिर नुन र तेल ले दाँत सफा गर्ने चलन.....
२८ भाद्र २०७७, आईतवार १३:०४
आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्, पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं चुरोट खानेलाई मात्रै होइन अन्य मानिसलाई पनि फोक्सोको स'मस्या हुनेगर्दछ । यदि तपाईले चुरोट खानुहुन्छ भने फोक्सो अवश्य खराब हुन्छ । तर घरेलु विधि प्रयोग गरेर ७२ घण्टाभित्र आफ्नो फोक्सो सफा गर्न सक्नुहुन्छ । यस्तो विधि सुरु गर्नुभन्दा.....